NAXDIN:Xildhibaan caayey asxaabta iyo Nabigga SCW#aqriso magaca | Xaqiiqonews
NAXDIN:Xildhibaan caayey asxaabta iyo Nabigga SCW#aqriso magaca
Kariim Quduusi oo ah xildhibaan ka tirsan golaha d xukuumada Faarisiga ee iiraan ayaa ku faanay in dowladooda ay ku guuleysatay in hogaamiyeyaal awoodleh ku dhex abuurato wadamada carabta iyo qaar ka mid ah dalalka dhaca qaarada Africa, Isagoona sheegay in dhammaan hogaamiyeyaasha siyaasadeed ee waayadii dambe soo baxay ay yihiin natiijooyinkii ka dhashay mashruuca kacaanka iiraan.
Quduusi oo ah xubin ka tirsan gudiga amniga qaranka iyo siyaasadda dibadda ee baarlamaanka iran ayaa sidoo kale halyeeyo ku tilmaamay Nimir An-Nimr oo ah wadaadi shiici ah oo sanadkii hore lagu dilay Sacuudiga, hogaamiyaha xisbiga la magac baxay xisbulaah Xasan Nasrallah, hogaamiyaha Xuuthiyiinta Cabdul Malik Al-Xuuthi, hogaamiyaha xizbiga shiiciga ah ee dalka Nigeria kuwaas oo uu sheegay in fikirka kacaanka iiran ay gaarsiiyeen meelo ka baxsan dalkooda.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu sidoo kale xildhibaankan ka digay tayaar uu sheegay in dhawaan uu ka soo baxay dalka Iiran kaas oo loolan adag kula jira nidaamka hadda jooga ee uu xukunka u Ayatullaah Cali Qominey. Waxa uu tilmaamay in tayaarkan cusub ee ugubka ah uu xambaarsan yahay dhaqanada reer galbeedka, uuna doonayo in uu meesha ka saaro nidaamka hadda jooga. “Waa in aan hor istaagnaa tayaarkan cusub ee ku xiran reergalbeedka ” ayuu yiri Quduusi.
Magaalada Mash-had waxaa lagu tilmaamaa magaalada labaad ee ugu weyn wadanka Iran, uguna dadka badan. Waxay ku taalaa waqooyi bari wadanka, waxayna dhacdaa xadka ay Iiraan la wadaagto Afghanistan iyo Turkuministan. Waxaa la sheegaa in ay hooy u tahay ku dhawaad saddex milyan oo dad ah.
Waxaa la tilmaamaa in dadka muslimiinta ee Ahlu Sunaha ee ku dhaqan wadanka Iiraan uu cadadkooda gaarayo ku dhawaad 20 milyan, Waxayna degaan magaalooyinka iyo gobollada dhaca xadka.